ADW Theme - DroidArmor Lite | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » themes » ADW Launcher ကို Themes » ADW Theme - DroidArmor Lite
ADW Theme - DroidArmor Lite APK ကို
* သင် ADW.LAUNCHER OR ADW Launcher EX ဒီနည်းကိုအဓိကအကွောငျးအရာကျင့်သုံးပါပထမ installed ရှိရမည်! *
ဒီ app က၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကို run မထားဘူး။ ဒါဟာ app ကို '' ADW.Launcher '' ဗားရှင်း 1.3 + OR '' ADWLauncher EX '' များအတွက်အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, Themes အခြား application များကဲ့သို့ပါဘူး "ဖွင့်" ကြပါဘူး။
သငျသညျ ADW.Launcher သို့မဟုတ် ADWLauncher EX သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ကို install ပြီးတာနဲ့, ထိုအခါသင်သည် Menu ကိုမှသွားနိုင်ပါတယ်> ADWSettings> Themes Preferences ကို> သင့်ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ> (သင်မည်သည့်ဆောင်ပုဒ် (s ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာဤတွင်ဖြစ်ပါတယ်) သင်ကို select နှင့်လျှောက်ထားရန်ဒေါင်းလုတ်လုပ်) ။
ADW Launcher ကိုနေရာချထားမပေးနိုင်ပါသလား? app ကို၏အမည်ကိုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဈေးကွက်ထဲမှာ '' Anderweb '': အ dev နာမအဘို့ရှာဖွေရေးလုပ်ပါ။